HOCD အမျိုးအစားခွဲများ - Jon Hershfield MA - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
HOCD Sub-အမျိုးအစားများ: Jon Hershfield MA အားဖြင့်
Sexual Orientation OCD - အပိုင်း ၃ - HOCD အမျိုးအစားခွဲများ
Los Angeles မြို့၏ OCD စင်တာ Jon Hershfield MA အားဖြင့်သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) နှင့်စိတ်ကို အသုံးပြု. လည်း HOCD သို့မဟုတ်ဂေး OCD အဖြစ်လူသိများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် OCD ၏ကုသမှုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ တစ်ခုဖြစ်ပွားနေသောစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းသုံးခု။
များစွာသောမူကွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် OCD ၏ Sub-အမျိုးအစားများ (HOCD) ရှိပါတယ်။
ငါကနဦးအစိတ်အပိုင်းကိုတဦးတည်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် OCD (ခေါ် "ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး OCD" ခေါ် "HOCD" ခေါ် "ဂေး OCD") အပေါ်မှာငါ့ဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရေးသားခဲ့သည်သောအခါ, တစ်ခုတည်းကိုသာအဖြစ်ရောဂါ၏ဤမဟုတ်ဘဲဘုံပုံစံကိုထင်ဟပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည် ငါကငါ့အဖောက်သည်အများအပြားအတွက်တင်ပြကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါဘာသာရပ်အပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောနောက်ထပ်မေးခွန်းများနှင့်ထောင့်နှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောသိသိသာသာအွန်လိုင်းတုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်မပေးခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်စွဲသောကြောင့်, သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်ရှက်စရာခံစားချက်တွေကိုအောက်မှာ-အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ သို့သော်လည်းဒီတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုအခြားစွဲထက် OCD အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive တစ်အတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့ပျံ့နှံ့ဖြစ်ကောင်းလည်းမရှိ - အကြံအစည်မလိုချင်တဲ့များမှာ! ယင်းကိုကွောကျရှံ့အကျိုးဆက်ဒီတော့မြင်သာထင်ပေါ်လာသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလိင်အရှေ့တိုင်းဆန် OCD အတွက်ဒါအလွန်ထင်ရှားဖြစ်ပုံရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားဘုံ OCD obsessive အတွက် "OCD အခက်တွေ့" တစ်စုံတစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက် Impulses သတင်းပို့၏ငြင်းပယ်အတွက်ဖြစ်အံ့သောငှါစိတ်ကူးပဒေသာကြောက်စရာပါပဲ။ သို့သော်အကြမ်းဖက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အလိုလိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းတစ်ခုနားလည်မှုရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် OCD နှင့်တကွ, ဝေဒနာသည်ယေဘုယျအားနေသမျှကာလပတ်လုံးမသည်အတိုင်း, နှုန်း se လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းမှားဘာမှမမြင်ရပါဘူး မိမိတို့ကိုယ်ကို လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း။ ဒီကုသမှုရှာကြံဖို့ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ခုခံအများကြီးအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါပစ္စုပ္ပန်ဒီ OCD ပေါ်ထွန်းခြင်းမြင်ကြပြီဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းပိုမိုတိကျတဲ့ဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် OCD အပေါ်ဆွေးနွေးမှုများတစ်စီးရီးဖြစ်လာသည်သောအရာကို၌ဤနောက်ဆုံးပေါ်အရစ်ကျအသုံးပြုလိုခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ပေါ်လာသောကွဲပြားခြားနားသောသိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) မဟာဗျူဟာချင်ပါတယ် ။ သူတို့ကိုငါခွဲခြားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်သတိရဖို့အရေးကြီးပါတယ် ခံစားနေရသူအများအပြားအမျိုးအစားနှင့်မယ့်တဦးတည်းပေါင်းစပ်ထဲသို့ကျဖို့များပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါသာရိုးရှင်းဘို့အလိုငှါအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းမတူညီနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ဖို့ "လိင်တူချစ်သူ" သို့မဟုတ် "လိင်တူဆက်ဆံသူ" တွေကိုအသုံးပြုဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်သည်းခံကြ၏။ လိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့ရိုးရိုးတစ်ဦးချင်းစီ OCD နှင့်အတူနိုင်ပြီး, ပါဘူး, တခါတရံတွင်ဖြောင့်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို obsessive ။
က OCD ဝိသေသလက္ခဏာများလျစ်လျူရှုဖို့လွယ်ကူသောကွောငျ့ဤအဖြစ်ကောင်းအသုံးအများဆုံးနှင့် HOCD ၏အနည်းဆုံးအစီရင်ခံဖော်ပြထားမျိုးကွဲနှစ်ခုလုံးပါပဲ။ တိုတိုမှာတော့အားလုံး-ဒါမှမဟုတ်-အဘယ်အရာကိုမျှ HOCD အမြဲတမ်းတဦးတည်းတိမ်းညွတ်၏ပါပြီသူမြား၏အတှေ့အကွုံကိုဖော်ပြထားတယ်သည်အခြားလမ်းကြောင်းမတူညီနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖူးဘူး, သူလိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူကိုဖွင့်ကျပန်းတဲ့ "လိင်တူချစ်သူ" အတွေးသို့မဟုတ် feeling တဦးတည်းရှိတယ် တစ်ရက်ကသူတို့ကို scares ။ ဒါဟာမကြာခဏရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အတူစတင်အဖြစ်အစီရင်ခံသည် "ငါသည်ထိုလူဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိသလား" နှင့် "ကငါပြု 100% အချို့မဖွစျနိုငျကွောငျးအဘယျအဓိပ်ပာ မဟုတ် အဲဒီလူကိုဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေ? "
အားလုံး-ဒါမှမဟုတ်-အဘယ်အရာကိုမျှ HOCD များတွင်မူလတန်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ယုံကြည်ချက်ဖြောင့်သောလူဒါ, မည်သည့်လိင်တူချစ်သူအတှေးအတိုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် မည်သည့် လိင်တူချစ်သူအတွေးများကိုငုပ်လျှိုးနေလိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ရပါမည်။ တကယ်တော့ဖြောင့်ကလူ do လိင်တူချစ်သူအတှေးအများရှိသော်လည်း, ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်တူချစ်သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသူတို့ကိုလျှောက်ထားဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့။ အမှန်တကယ်မှာတော့သူကစကားလုံးက "လိင်တူချစ်သူ" ပင်သာ "လိင်တူချစ်သူ" အတွေးအဖွစျဖျောပွနိုငျသောအရာကိုမလိုဘဲပကတိအဆင့်တွင်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးမဟုတ်ရင်သက်သက်သာဖြောင့်စိတ်ကိုညစ်ညမ်းမူအဖြစ်လိင်တူချစ်သူအတွေးများကိုမြင်တော်မူသောထိုဝေဒနာသည်များအတွက်, compulsive ဂေးအတှေးအထူးထူးအပြားပြားသက်သေထုံးတမ်းမှတဆင့်သွားအောင်အာရုံစိုက်ခံရဖို့သွားနေကြပါတယ်။ ဤသည်ဖြောင့်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်တစ်လိင်တူချစ်သူအတွေး၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဘာမှ၏ရှောင်ရှားရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ပုံစံကိုယူနိုငျသညျ။ ဒါဟာမကြာခဏဝေဒနာသည်ပင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိခြင်းအဖြစ်မြင်တော်မူသောကြောင့်လူရှောင်ရှားပါဝငျသညျ။ တစ်ဦး handwasher မိမိတို့လက်ကိုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုမရှိအချို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သကဲ့သို့, ဒီ HOCD ဝေဒနာသည်အတွက်ပိတ်လိင်တူချစ်သူအတွေးစုစုပေါင်းပပျောက်ရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) အားလုံး-ဒါမှမဟုတ်-အဘယ်အရာကိုမျှ HOCD အဆိုပါဝေဒနာသည်အလေ့အကျင့်ကိုသူတို့လိင်တူချစ်သူမဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောပြရန်တိုက်တွန်းတွန်းလှန်နေစဉ်အတွင်းလိင်တူချစ်သူအတွေးများကိုဖြစ်ပေါ်သောအရာမှတဖြည်းဖြည်းထိတွေ့ပါဝင်သင့်ပါတယ်များအတွက်ကုသမှုမဟာဗျူဟာများ။
ပြည်သူ့ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဆက်ဆံရေးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ တချို့လူတွေကချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကံကောင်းများမှာအချို့သောလူတွေကကံများမှာအချို့သောလူတွေကနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူအခြို့ကယ့်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ OCD ၏ပြောပြလို့မရပါဘူး။ တစ်ဦး OCD ဝေဒနာသည်သူတို့ပျက်ကွက်လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအဖြစ်ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအဘို့အကာရှင်းပြချက်အဖြစ်အလားအလာ gayness အသုံးပြုသောအခါ HOCD ၏ဤပုံစံတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်ဆံရေး HOCD နှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ယောက်ျားအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမြင်စေခြင်းငှါအနေဖြင့် "ကိုယ့်အမြိုးသမီးမြားကိုနားလညျမရ", "လူ-မုန်း Dyke" အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီးသူတို့၏ "စစ်မှန်သော" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ "ငြင်းပယ်ထဲမှာ" ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မည်။
မကြာခဏဤကဲ့သို့သောအမှုများတွင်, HOCD သူ့ဟာသူတစ်ခါတစ်ရံဆက်ဆံရေး OCD (ခေါ် ROCD) သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးသိသိသာသာ OCD လို့ခေါ်ပါတယ်အဘယျသို့များအတွက် smokescreen ဖြစ်ပါတယ်။ ROCD နှင့်အတူသူများသည်မဟုတ် "တကယ်" မတ်ေတာပါသို့မဟုတ်လိင်ဖြစ်ခြင်း၏စိုးရိမ်မှုတွေန်းကျင် revolve ကြောင့် obsessive ရှိသည်ဖို့လေ့, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်ညာဘက်လူတစ်ဦးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခံရဘဲ, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များအတွက်ညာဘက်လူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကြောင့်ကျန်းမာလိင်ကွဲကြားဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၏နိုငျအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ conceptualize လျှင်ဆက်ဆံရေး HOCD နှင့်အတူသူများသည်မိမိတို့၏စိတ်တွင်ဤကိစ္စများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ချွတ်ပယ်နိုင်, သူတို့ကတကယ်တော့လိင်တူချစ်သူဖြစ်နေနိုင်ပါသည်!
HOCD ၏ဤပုံစံကိုမိတ်ဖက်အလေးပေးသောကြောင့်, ခံစားနေရသူ Over-တက်ရောက်ရန်သူတို့အတူတူလိင်လူတွေကိုပြန်ပြောပြမည်သို့နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ လူသည်သူနားလည်သဘောပေါက်ပိုကောင်းခံစားရကြောင်းသတိပြုမိစေခြင်းငှါ, အတူဘုံ၌ သာ. ရှိပါတယ်, နှင့်အမျိုးသမီးသူ့ကိုကျေနပ်အောင်မနည်းလမ်းတွေထဲမှာအခြားသောသူနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်အတော်ပင်။ ပျောက်ဆုံးတစ်ခုတည်းသောအရာဟာလိင်ဖြစ်ပါသည်, သူစဉ်းစားတွေးခေါ်, ဤသူက "တကယ်" မေတ္တာရန်ကြိုးသူတွေအကြောင်း compulsive ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအများကြီးအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, sensitivity ကို, သည်းခံခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုရရှိနိုင်မှု - အလားတူပင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်ကင်းမဲ့ဟန်အခြားအမျိုးသမီးရှယ်ယာအရည်အသွေးတွေကိုသတိထားပါဖြစ်လာပေမည်။ HOCD ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အား, ဒီလိင်တူချင်းဖော်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်လုံးဝပုံမှန်ကြည့်ရှုနေပါတယ်။ "ဒါပေါ့ ငါကနေလာမယ့်တာဘယ်မှာငါ၏အလိင်တူချင်းမိတ်ဆွေများကိုနားလည်ပါသည်။ သူတို့ကတခြားလိင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အရာကိုသိ! သူတို့သည်ငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုနှင့်တွန်းအားရ! "ဒီစကားလုံးက" လိင်တူချစ်သူ "ညီမျှခြင်းထဲသို့ဝင်မထားဘူး။
ဆက်ဆံရေး HOCD များအတွက် CBT လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေများအတွက်ရိုးရာ Exposure နှင့်တုံ့ပြန်မှုကာကွယ်တားဆီးရေး (ERP) ပါဝင်မယ့်, ဒါပေမယ့်လည်းရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖို့အားနည်းချက်သရုပ်ပြကြောင့်အပြုအမူတွေကိုထိတွေ့, လိင်ကွဲဆက်ဆံရေး၏ "အရည်အသွေး" သို့မဟုတ် "ပြည့်စုံ" အကြောင်းကိုမသေချာမရေရာလက်ခံနှင့်နေသည် သည်အခြား Non-ရှောင်ရှားခြင်းထိတွေ့မှု။
HOCD ၏ဤပုံစံကိုယေဘုယျအားလိင်ထက်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် (မသီးသန့်သော်လည်း) ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်, ညှဉ်းဆဲစော်ကား, ဒါမှမဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြသူတွေကိုအတွက်ပေါ်ပေါက်ပုံရသည်။ ဒီလူမှုရေးတော့ပူပန် Disorder အတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်သကဲ့သို့က "နိုငျကငျြ့" ဟုအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အစိတျထဲတှငျနထေိုငျထကြာနှင့်အသက်တာ၌မဆိုရိပ်မိပျက်ကွက်တစ်ခုပြည်တွင်းရေးကြေညာချက်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း "သင်လိင်တူချစ်သူပါပဲ။ " ဒါဟာစော်ကားမှုတစ်ခုအဖြစ်အဓိပ်ပာယျရဲ့တစ်ဦးအကြံပြုချက်ထက်ပို တဦးတည်းလိင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာဖွေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။
HOCD ဤအမျိုးအစားတွင်တွေ့မြင်စဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းစိတ်-အလွဲသုံးစားမှုမကြာခဏထပ်မံအလှည့်အတွက် ပို. ပင်စိတ်ကျဝေဒနာမှဦးဆောင်သည့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတှေး, လှဲရာပိုမိုနက်ရှိုင်းစိတ်ကျရောဂါ, စေပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဒီဝေဒနာသည်သူတို့မိဘများအကြီးမြတ်ဆုံးစိတ်ပျက်စရာအဖြစ်ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအထဲကအသကျရှငျသူတို့ကိုယ်သူတို့ကစိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့အတွက် Pseudo-လိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်ပြည်နယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏ line ကိုသူတို့ဆန္ဒရှိတိမ်းညွတ်ဖို့မမြင်ရတဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့ချစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပါတယ်။ HOCD ဤအမျိုးအစားရှိသူများကုသများတွင်သိမြင်မှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိင်မှဆီလျှော်သောစိတျထဲတှငျပုံပျက်ဆက်ကြောင်းအဖြစ် "နိုငျကငျြ့" အတွေးများကိုသိရှိနိုင်ဖို့သင်ယူခြင်းအပေါ်မှာပိုပြီးအလေးပေးရှိပေမည်။ ERP သိသိသာသာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ကတိကလိုအပ်တယ်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်လည်းထိတွေ့မှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးမတိုင်မီပထမဦးဆုံးစိတ်ကျရောဂါကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆေးခန်းသင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လိင်တူချင်းတူးဖော်ရေးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်အကြောင်းကို obsessive သူကို OCD နှင့်အတူလူအဖြစ်ညင်သာပျော့ပျောင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများသုံးနိုင်ပါသည်, (ဆိုလိုသည်မှာ "ဆရာဝန်" ကစားခြင်း) နှင့်အမှုအရာကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ခံစားရပုံကိုကွဲပြားခြားနားသောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသင်ယူနေသောကလေးငယ်များအတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ငုပ်လျှိုးနေလိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ "သက်သေ" ။ ဒါကြောင့်လိင်ကွဲအပြုအမူတစ်ခု Post-pubescent ဘဝရှိနေသော်လည်းမလိုချင်တဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူအတှေး၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြောက်မက်ဖွယ်သံသယအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝေဒနာသည်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ကလေးဘဝအမှတ်တရများနှင့်မဆိုလိင်တူချင်းရှာဖွေရေးကာလအတွင်းရှိခဲ့ပါပြီအံ့သောငှါအတှေးနဲ့ခံစားခကျြ၏ unknowable အမှတ်တရများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ "ကျွန်မအတိအကျဘာလုပျခဲ့သလဲ,"
အပျိုဖော်ဝင်များ၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဆယ်ကျော်သက်လိင်, တိမ်းညွတ်နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများတွေ့ကြုံခံစားရန်အဘို့အဒါဟာအစဘုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးဒါကြောင့်လည်းလိင်စိတ်ကိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အတွင်း OCD နှင့်အတူလူတို့အဘို့, ဒီကအရမ်းဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူ၏ HOCD နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးသူတို့အဘို့မိမိတို့လိင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခဲ့သော၌ဤကာလအပေါ်ကိုပြန်ကြည့်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုအတူကိုက်ညီမှုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်နိုင်ကြောင်းဘာမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။
HOCD ၏ဤထင်ဟပ်ပုံစံပေါ်တွင်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲကောလိပ်ဒါမှမဟုတ်အသက်တာ၌အချို့သောအခြားအချက်မှာအရပျကိုယူကြပြီအံ့သောငှါမဆိုလိင်တူချင်းကစား compulsive ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါတယ်။ HOCD ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူသူတို့အဘို့ကုသမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုခုခံဖို့မလှူအဖြစ်အစားတဦးတည်းရဲ့လိင်ထွက်တွက်ဆတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ပိုင်းစစ်ဆေးခြင်းကိုဖော်ထုတ်နေသည်။ သိချင်စိတ်တိမ်းညွတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲ, ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ရီးရဲလ်က Man / ရီးရဲလ်အမျိုးသမီး HOCD
OCD ၏ဤပုံစံထဲကနေဆင်းရဲခံရသောပြည်သူ့ပုလ်နှင့်ဣတ္သူတို့နှင့်အတူလာသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များအပေါ်အလေးပေးအများကြီးထားပါ။ တစ်ဦးကအထီးဝေဒနာသည်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအထီးသတိထားမိ, ပြီးတော့ယောက်ျားအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသတိထားမိနိုင်ဖြစ်ခြင်းဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆုံးမပါလိမ့်မယ်။ သူသည်ဤဣတ္၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, တစ်ခုခုကို "မှန်ကန်သူ" (ထပ် All-or-ဘာမျှမစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်ပါ) ၏အဘယ်သူမျှမအောင်စရှိသည်မယ်လို့ယူဆတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းသူကယဉ်ကျေးမှုအ Non-ပုလ်အဖြစ်ကိုမြင်ရစေတယ်ခဲ့ကြပေမည်အနုပညာသို့မဟုတ်အခြားအရာများအတွက်လူဆှဖှေဲ့မှတဆင့်သူ့ဟာသူတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
HOCD ၏ဤပုံစံများအတွက်သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) ကိုဝေဒနာသည်ထိုကဲ့သို့သော flamboyant လိင်တူဆက်ဆံဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ program ကိုစောင့်ကြည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဲလေးမြားတကျရောကျအဖြစ်, "မှေ့" သို့မဟုတ်အားနည်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းပစ္စည်းကိုပိုမိုထိတွေ့ပါဝင်လိမ့်မည်။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံထက်ပိုလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုထက်ထွက်လာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပင်တစ်ဦးလိင်ကွဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးလှပသတိထားမိပြီးတော့ "စစ်မှန်သောအမြိုးသမီးမြား 'သာအစဉ်အဆက်လူတို့သညျကိုစဉ်းစားသောယုံကြည်ချက်မှတဆင့်ဒီဖျက်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအစမှနျကွောငျးဝနျခံသောအပြုအမူသို့မဟုတ်အစဉ်အလာပုလ်နဲ့ဆက်စပ်သည့်အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ attribute ကို၏ရှောင်ရှားခြင်းပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မည်။ ဒီဝေဒနာသည်များအတွက် exposure "butch" လိင်တူချစ်သူများသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ဇာတ်ကားပါဝင်လိမ့်မည်။
Groinal တုံ့ပြန်မှု HOCD
ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပါရာဒိုင်း "ငါသည်သာလျှင်အလွန်တိကျတဲ့ Pre-approved အခြေအနေများတွင်လိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ် groinal အာရုံကိုတွေ့ကြုံခံစားရမယ်။ " ဖြစ်ပါသည်အဲဒီအခွအေနပုံမှန်အားဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု, အသက်-သင့်လျော်သောအဖွဲ့ဝင်တဦး၏အထံတော်၌ဆိုလို။ သို့သော်ဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်အချိန်အနည်းငယ်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရှိပါတယ်:
အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး (လိုချင်သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့) လိင်စိတ်နိုးထစေမည်အကြောင်း,
သူတို့နာကျင်တစ်ခုခုစဉ်းစားကြပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားနေကြရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စိုက်ထူမရကြဘူးလို့ယောက်ျားခေါင်းကိုက်မရကြဘူး။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, အဘယ်သူနှိမ့်ချအဲဒီမှာအပေါ်င့်သောအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်း သို့သော်လည်း HOCD ဝေဒနာသည်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားများအဘို့အာရုံစစ်ဆေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ OCD အပေါ် capitalizes ရှုပ်ထွေးမှုများ၏တစိတ်တပိုင်း groinal ဆွယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောအာရုံခံစားမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ Fellatio သို့မဟုတ် cunnilingus ကပို့ဆောင်ဘာကျားမနေပါစေအကောင်းခံစားမိသွားပေမယ့် HOCD စိတ်ထဲကသာလက်ခံနိုင်ရန်အတွက်ဆွဲဆောင်နေကြသည်ဘယ်သူကိုမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပေးပို့တဲ့ခြင်းကိုအလေးအနက်ဆိုသည်။ HOCD ကို "မှားယွင်းတဲ့" အချိန်တွင်မဆိုအပြုသဘော groinal အာရုံခံစားမှုကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏ဘာပဲမှအထွေထွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုဆိုလိုရမယ်လို့စဉ်းစားထဲသို့စိတ်ကိုတွက်ချက်။
HOCD ၏ဤအမျိုးအစားကုသမှုများအတွက်သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) မိမိတို့၏ရိုးရာဦးစားပေးပြင်ပကျရောက်ကြောင်းပစ္စည်းနှိုးဆွဖို့ groinal တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ယုံကြည်ချက်ဖော်ထုတ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုပါဝင်မယ်။
လူတိုင်းမသဘောတူပေမယ့်အဲဖရက် Kinsey လိင်တဦးတည်းဘက်မှာဖြောင့်နှင့်အတူတစ်စကေးအပေါ်တည်ရှိကြောင်း, ပြုသကဲ့သို့အများအပြားယုံကြည်, အခြားအပေါ်လိင်တူချစ်သူများနှင့်အများအားဖြင့်တစ်နေရာရာမှာအလယ်မှာရှိလူများ။ မသံသယစဉ်းစားရန်အချို့သောစာဖတ်သူများအဘို့ထွက်လာပါတယ်ပါလိမ့်မည်နေစဉ်, လိင်ကွဲတခါတရံအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူအများအပြားကလူလိင်တူဆက်ဆံသူအတှေး, ခံစားခကျြ, အာရုံနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်။ obsessive-compulsive သဘောထားတွေမပါဘဲသူများသည်မိမိတို့အဖြစ်မှန်၏ဤရှုထောင့်ခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤရွေ့ကားအတန်ငယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် arousal ဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုနှစ်သက်ပေမယ့်လည်းလိင်တူချင်းစိတ်ကူးယဉ် (နှင့်ပင်အပြုအမူတွေ) ကိုရှာဖွေသူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာဖွယ်ရှိသူတို့လိင်ဖြစ်စေနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာပွညျ့စုံ၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ပြောပေမယ့်အစားရိုးရှင်းစွာ Kinsey စကေး၏အစွန်းတစ်ခုခုချွတ် dangling ကြသည်မဟုတ်သူကိုလိင်ကွဲနေကြသည်မညျ့သူရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲဖြစ်ကြသည်။
အဖြစ်တစ်နေရာရာမှာလိင်၏ဤရောင်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့ကြုံခံစား, ဒါပေမယ့်လည်း HOCD ရှိသူတို့လူတို့အဘို့, ဒီကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရိုးရိုးများမှာသို့မဟုတ်မပါလျှင်ဘယ်လိုဝေးတဦးတည်းဦးတည်ချက်သို့မဟုတ်အခြားသူတို့ "ပိုင်" သေချာများအတွက်သိလို, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကို "ညာဘက်" ဟူသောဝေါဟာရကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ "ငါသည်% လိင်တူချစ်သူ 10 လား 20%? ငါသေချာဘို့မသိရပါဘူးလျှင်, အစဉ်မပြတ်ငါငါလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသိုဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ "သင့်လျော်တဲ့တံဆိပ်မရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအကျပ်အတည်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တွင်နေထိုင်ကြသည်။
HOCD ဤအမျိုးအစားများအတွက်ကုသမှုစိတ်ကိုအခြေပြု CBT အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုခံ။ အဆိုပါထိတွေ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းရည်ရွယ်ပေမယ့်မသေချာမရေရာမှာမပေးပါ။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံဝေဒနာသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့တံဆိပ်ကပ်ဖို့မှုအရာကိုမသိဘဲဘယ်တော့မှ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုဖော်ပြထားတယ်ရသောတစ်ဦး Imagination ထိတွေ့ဇာတ်ညွှန်း၏ပုံစံအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
(တကယ်) လိုအပ်နေသောူပည်သူ-To-သိ HOCD
ဤရွေ့ကားလိင်ကွဲအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သော်လည်း, သူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကိုကနေ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကိုရန်, အမှန်တကယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုဖို့သွားကြပြီကြောင်းဤသို့သောအတိုင်းအတာအထိတည်းကကုသမှုမရှိဘူး (သို့မဟုတ်ညှဉ်းဆဲ) HOCD နှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြသူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အတန်ငယ်ရှားပါးသည်နှင့်ငါအချို့လူတွေကဒီကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဟုပြောစေခြင်းငှါ, စိတ်ကူးမယ်လို့ "အိုကေရဲ့ကိုယ့်ပြီးတော့လိင်တူချင်းခေါ်ကြကုန်အံ့," သို့သော်ဤနေရာတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ OCD ထံမှခံရတဲ့သူတွေ, မသက်ဆိုင်ပေါ်ထွန်းခြင်း၏, မရေရာတစ်ခုသည်းမခံဆန့်ကျင်ရုန်းကန်နေကြသည်။ OCD မပါဘဲပြည်သူ့အကြီးအကျယ်ကအများကြီးသတိထားရမှာမမသေချာမရေရာသည်းခံ။
OCD ရှိသည်ပါဘူးသူကိုမဆိုစာဖတ်သူအဘို့အသင်သေဆုံးသည့်အခါအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို 100% အချို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းကိုတကယ်ခက်ခဲစဉ်းစားစမ်းပါ။ အခုဆိုရင်သင်နှစ်သက်သောကြောင့်လူအပေါငျးတို့သကိစ္စရပ်အပေါ်သေချာမရရှိစမသငျသညျအကျယ်တာဝန်မဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူး။ ဒါကတစ်ဦး OCD ဝေဒနာသည်မကြာခဏခံစားရပုံဖွစျသညျ။ သူတို့ညံ့ဖျင်းမလိုချင်တဲ့အတှေးနဲ့ခံစားခကျြကအန္တရာယ်အန္တရာယ်ခန့်မှန်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဤအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားဘို့တာဝန်တစ်ခုပုံကြီးချဲ့အသိမသာ။
နောက်ဆုံးတွင်အချို့ HOCD ခံစားနေရသူအဘို့, လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း သူတို့ဖြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသေချာမှုအတွက် သိ. မဟုတ်မှ။ ဒါကြောင့်သူတို့က gayness များအတွက်အမှုတည်ဆောက်ရန်စတင်။ ဤသည်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မြားတှငျပါဝငျခွငျးငှါမိမိတို့လေ့ကျင့်ဖို့ကြိုးစားနေ, လိင်တူချစ်သူအထူးကုထံမှဆေးကုသမှုရှာကြံပါဝင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်လိင်တူချစ်သူလိင်ကြိုက်နှစ်သက်မှ, ဒါပေမယ့်တခါအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အဆုံးဖြတ်ရန်သေချာပေါက်မဖြစ် - "ငါသည်လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ဖြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကို?"
ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအတွက် backfires ။ လူတစ်ဦးအတန်ငယ်ကျေနပ်ပေမယ့်ဖြောင့်လိင်မှဦးစားပေးမအတွေ့အကြုံကိုတွေ့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာအတွေ့အကြုံရှာဖွေပွုပွီးလြှငျအဘို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုအမျက်သိုနေကြဖြစ်စေ။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သူတို့ကသူတို့သည်းမခံရှာတွေ့တူညီမသေချာမရေရာ, ပေါင်း OCD ပိုမိုလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်။ ရုံ HOCD ၏အခြားပုံစံများ၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုရည်ရွယ်ချက်-မသိထက်သက်သေပြဘို့သည်းခံစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားငါအရှင်ဝေးကုသကြပြီ HOCD ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသော Subtype နှင့်ထောင့်သော်လည်း, အခြားသူများကိုဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးရဲ့နောက်အရစ်ကျတှငျကြှနျုပျတို့ထိရောက်သောကုသမှု HOCD နှင့်ဘုံအဆီးအတားအချို့ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
JON HERSHFIELD, MFT သည်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ရှိ OCD စင်တာတွင်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး OCD နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက်သိမှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးကိုအထူးပြုသည်။ ဂျွန်သည်စိတ် ၀ င်စားမှုများပိုမိုနားလည်စေရန်အထူးရည်ရွယ်ထားသည့်“ Pure_O_OCD” အွန်လိုင်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏စောင့်ရှောက်သူဖြစ်သည်။ သူသည် OCD ဝေဒနာသည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်“ OCD-Support” တွင်ပါ ၀ င်သောပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသပေးခြင်းအပြင် OCD၊ Trichotillomania နှင့် / သို့မဟုတ် Dermatillomania နှင့် Social Anxiety / Social Phobia တို့အတွက်အုပ်စုလိုက်ကုထုံးကိုလည်း ဦး ဆောင်သည်။ Jon ကို (၃၁၀) ၈၂၄-၅၂၀၀ (ext ။ 310) သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိ OCD စင်တာသည်ပုဂ္ဂလိကပြင်ပလူနာဆေးခန်းဖြစ်ပြီး OCD အတွက်သိမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စိုးရိမ်စိတ်အခြေခံသည့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမမှန်ရောဂါ (BDD), Trichotillomania နှင့် Social Anxiety စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းကုထုံးအပြင်စင်တာသည်အပတ်စဉ်ကုထုံး ၆ ခုအပြင်တယ်လီဖုန်းကုထုံးနှင့်အွန်လိုင်းကုထုံးတို့ကိုလည်းပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ http://www.ocdla.com.